« …. Nandray ny tenin’Andriamanitra izay notorinay ianareo, dia tsy noraisinareo ho enin’olona, fa araka izay arina, dia ny tenin’Andriamanitra, izay miasa ao anatinareo izay mino koa. » 1 Tesaloniana 2 :13
"Ampahirato ny masoko, mba hahitako zavamahagaga ao amin’ny lalànanao." Salamo 110 :18
Manjary velona ny hafatra ampitain’ny Baiboly raha vakiana, tsy tahaka ny asasoratra nataon’olona, fa amin’ny maha tenin’Andriamanitra azy. Ireto misy torohevitra vitsivitsy :
-Niteny Andriamanitra mba ho azo izay lazainy. Aoka àry isika hamaky tsotra fotsiny ny Baiboly, ary tsy hikaroka fanazavana saro-takarina. Aleo izy vakina mitohy, isan-takila, toy izay itsimponana andininy etsy sy eroa. Ny famakiana tsipotipotika dia tsy ahatakarana ny hevitra ankapobeny. Mety ho moramora kokoa ny manomboka amina filazantsara iray, ohatra ny filazantsara araka an’i Marka.
-Ny teny voasoratra farany indrindra ao amin’ny Baiboly dia natao 1900 taona lasa tany ho any. Matetika izy ireny no miresaka zava-misy teo amin’ny fiainana andavanandro fahagola. Na izany aza anefa, tena mbola manan-kery mandraka ankehitriny ny fampianarana ara-panahy entin’ny Baiboly, ary tsy ilaina ny fahalalana avo lenta, hoenti-manakatra ny heviny ara-pitondrantena.
-Aoka hivavaka rehefa hamaky ny Baiboly. Tsy hamakafaka lahatsoratra no atao, fa mandray am-pahatokiana ny hafatra entiny, ary mino izany. Ny Fanahy Masina no ahafahantsika manakatra sy mandray ny Tenin’Andriamanitra.
-Aoka rehefa mamaky azy tsy hanana hevitra efa masaka an-tsaina mialoha, ary aoka hanao toy ny tsy misy izay zavatra efa re na novakiana. Aoka isika hihevitra hatrany ho toy ny hoe : izay vao mijoro eo anatrhan’Andriamanitra. Tena ilaina izany, amin’izao vanim-potoana ampielezana hevitra maro tsy dia mitombina loatra mikasika ny Baiboly izao.
-Aoka tsy hitady fampianarana filôzôfika ao anatiny, rehefa mamaky azy. Aleo izay ilaintsika ho an’ny fiainam-panahintsika isanandro no tadiavina ao. Mihamazava ny tenin’Andriamanitra rehefa mampiahtra izay azonysika isika.